ယနေ့ ဒကာ ဒကာမတွေ ဘာလုပ်နေကြတာလဲလို့မေးရင် …မသေသေးလို့ အားနေလို့ တရားလာနာ တာ။ ဟုတ်ပြီနော်။ ဒီရုပ်ကြီးက သေမိန့်မကျထားဘူးလား.. နေရာရယ် ဒေသ ရယ် ရောဂါရယ် အချိန်ရယ်သာ မသိတာ။ သေမှာကတော့ မသေချာဘူးလား... သေတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူသတ်တာလဲ .. အခုဒကာ ဒကာမတွေထိုင်ထားတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးက ၉၆ ဖြာ ဝေဒနာလည်း ဒီရုပ်ကြီးမှာပဲ ၊ သွေးတိုး ဆီးချိုဆိုလည်း ဒီရုပ်ကြီးမှာပဲ အသည်း နှလုံး ကျောက် ကပ်ဆိုလည်း ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာပဲ ဒီကာယကိုယ်ခန္ဓာကြီးက မသတ်ဘူးလား…...
( ၄ ) ရတနဃရသတ္တာဟ -
ရတနာစင်္ကြံ၌ စင်္ကြံကြွတော်မုပြီး၍ ရတနာဃရသတ္တာဟ၌ ( ၇ ) ရက်ပတ်လုံး
စံနေတော်မူသည် ။ ၎င်းရတနာဃရသည် မဟာဗောဓိပင်၏ အနောက်ဘက် အတောင် ( ၄၀ )
အကွာ ပေ ( ၃၀၀ ) ခန့်ဝယ် တည်ရှိနေပေသည် ။ နတ်တို့ဖန်ဆင်းသည့် ရတနာရွှေအိမ်၌
ဒီတရားကိုနာရပြီး ဦးဆေကိန္ဒကတော့ စိတ်တွေပြောင်းသွားတယ်။
တစ်နေရာမှ ကုန်ပစ္စည်းများကို သိုလှောင်ထား၍ တခြားတစ်နေရာကို ပြန်လည်ဖြန့်ချီခြင်းကို ကုန်သည် ဟု အကျွန်ုပ် သဘောပေါက်ပါသည်။ အသိဥာဏ်ရှိသော ကုန်သည်တို့သည် အလွန်တိုးတက်ကြီးပွားကြသည်။ စင်္ကာပူနိုင်ငံသည် ကုန်သည်အလုပ်ဖြင့်ကြီးပွားနေသော နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ၎င်းနိုင်ငံတွင် ကိုယ်ပိုင်ထွက်ကုန်ပစ္စည်း ဘာမှမရှိပါ။ စားသောက်ဖွယ်ရာများ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ ယုတ်စွအဆုံး သောက်စရာ ရေ ပင်လျှင်မရှိဟုသိရပါသည်။ သို့သော်ထိုနိုင်ငံသည် တခြားနိုင်ငံများမှ ကုန်ပစ္စည်းများကို မိမိနိုင်ငံတွင်သိုလှောင်ထား၍ တခြားနိူင်ငံများသို့ ပြန်လည်ဖြန့်ချီခြင်းဖြင့် ကြီးပွားတိုးတက်နေပါသည်။
( ၃ ) ရတန စင်္ကမသတ္တာဟ -
အနိမိတ္တသတ္တဟ = မမှိတ်မသုံရပ်၍ ကြည့်ရှုတော်မူသော နေရာဋ္ဌာနနှင့် အပရာဇိတ
ပလ္လင်အကြား အတောင်ခြောက်ဆယ်ရှည်လျားသော နတ်တို့ဖန်ဆင်းအပ်သော ရတနာအတိပြီးသော
ရတနာစင်္ကြံ၌ ( ၇ ) ရက်ပတ်လုံး စင်္ကြံကြွတော်မူ၍ သီတင်းသုံးတော်မူ၏ ။ ထိုရတနာ
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 10:36 PM No comments:
သတိသံဝေဂရကြပါစေ (ငရဲဘုံ တွေ့ရှိ)
ထိတ်လန့်ဘွယ်ရာ သံဝေဂရစရာ မေးလ်တစ်ခုကို ၊ ၇. ၀၂ . ၂၀၁၁။ တနင်္လာနေ့ နေ့လည် ၂ နာရီ ၃၀ မှာ ရောက်လာလို့ ဖတ်သိလိုက်ရတယ်။
ဗုဒ္ဓ ဘုရားဟောကြား ညွှန်ပြခဲ့တဲ့ ငရဲဆိုတာ ဘာသာတရားကို အထူးလေးစားသူ တစ်ယောက်ဖြစ်တာမို့ အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်ပြီးသားပါ။ သို့ပေမဲ့ မတွေ့ရ မမြင်ရတဲ့ နေရာမျိုးမို့ တစ်ခါတခါ တကယ်ရော ရှိပါရဲ့လားလို့ ယုံမှားသံသယ ဖြစ်ကြသူတွေအဖို့ တကယ်ကို သိပ္ပံနည်းနဲ့ တွေ့လိုက်ရပါပြီဆိုတာ သိစေချင်လို့ ဒီ အကြောင်း အရာလေးကို ဖောက်သည်ချလိုက်တာပါ။
" ကိုယ်ပိုင်ခေတ်ကို တည်ဆောက်ပါ "
* ရိုင်းပြတဲ့ သူရှိသလုို... ယဉ်ကျေးတဲ့ သူရှိတယ်၊
* ကြမ်းတမ်းတဲ့ သူရှိသလို နူးညံ့တဲ့ သူရှိတယ်၊
* ရုိုင်းပြတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသလုို ယဉ်ကျေးတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတယ်၊
* ကြမ်းတမ်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသလုို နူးညံ့တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတယ်၊
ဒီတရားကိုနာရပြီး ဦးဆေကိန္ဒကတော့ စိတ်တွေပြောင်းသွား...